Diyopost.com :: देउवा र प्रचण्डको 'गोप्य' सम्झौता पत्र कसले ‘लिक’ गर्‍यो ? देउवा र प्रचण्डको 'गोप्य' सम्झौता पत्र कसले ‘लिक’ गर्‍यो ? - Diyopost.com
काठमाडौं, ३१ असार । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच असार २८ गते मंगलबार ७ बुँदे राजनीतिक सम्झौता भयो । सार्वजनिक नगर्ने सर्त गरिएको उक्त सम्झौता तत्कालै दिल्ली पुगेको खुलाशा भएको छ । सम्झौताको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा पाएका कांग्रेस र माओवादीका दोस्रो वरियताका नेताहरुले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र भारतीय संस्थापन पक्षलाई बुझाएका थिए ।
दोस्रो वरियताका नेताहरु मध्ये अमरेश कुमार सिंहको भारतमा नजिकको सम्बन्ध छ । उनले भारतीय पक्षले हुँदै गरेको सम्झौताको ड्राफ्ट भारतीय पक्षलाई बुझाएका हुन् । त्यसो त माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलाई पनि भारतीय गुप्तचरसँग नजिकको सम्बन्ध भएको आरोप लगाईन्छ । कांग्रेस नेता सिंहले भारतीय पक्षलाई बुझाएको सम्झौता पत्र नेपाली पत्रकारले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लिएका थिए । मधेस क्षेत्रबाट पत्रकारीतामा क्रियाशिल पत्रकारहरुले भारतीय पक्षसँग उक्त सम्झौता लिनुपरेको थियो ।
दल्लीबाट सहमति पत्र लिनुपरेपछि नेपाली पत्रकार नै अचम्ममा परेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा केही पत्रकारले त्यसको विरोध नै गरे ।
‘कस्तो विडम्बना : कांग्रेस–माओवादीबीचको ७ बुँदेँ सहमति दिल्लीबाट हामीलाई ह्वाट्सएपमा आउँछ ! तर, काठमाडौंले भन्न चाहँदैन,’ पत्रकार विरेन्द्र केएमले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
मधेस र दिल्लीको विषयमा कलम चलाउँदै आएका उनलाई यो सम्झौता दिल्लीबाट आएकोमा आश्चर्य छ । त्यसैले उनले काठमाडौंले विभेद गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
दिल्लीबाट आएको उक्त सम्झौता मधेसी समुदायका पत्रकारले आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरेपछि सार्वजनिक भएको थियो । यद्धपी प्रमुख सञ्चार गृह भने त्यसको पहुँचमा पुग्न सकेका थिएनन् । राजधानीबाट प्रकाशित एक राष्ट्रिय दैनिकको अनलाइन संस्करणले पनि मधेसका एक पत्रकारको बाईलाईनमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाको योजनाकार रहेको दिल्लीलाई देउवा प्रचण्डको यो सम्झौता सार्वजनिक नहुने कुरै भएन । तर, दिल्लीले हतार गरेको केही नेताहरुको बुझाई छ । ‘शिर्ष नेताहरुबीच भएको सम्झौता सरकार नबन्दासम्म सार्वजनिक नगर्ने कुरा थियो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘केही साथीहरुको हतारका कारण यो सार्वजनिक भयो । जुन निकै दुखद छ ।’
माओवादी केन्द्रका एक कार्यालय सदस्य पनि सम्झौता यति छिट्टै सार्वजनिक हुनुमा आश्चर्य छन् । ‘हामी र कांग्रेसबीचको सम्झौता जुन ढंगबाट बाहिर आयो । त्यो नेपाली नेताबाटै आएको भए सुहाउँथ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन,’ उनले दियोपोस्टसँग भने, ‘यो लिक गर्न कांग्रेसका साथीहरुलाई किन हतार भएको हो ?’
त्यसो त नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप वा नेपाली नेताहरुको ‘चाकडी’ नौलो कुरा भने होईन । यसअघिका राजनीतिक सम्झौताहरु पनि नेपालमा भन्दा पहिले दिल्लीमै ड्राफ्ट तयार हुने गरेका छन् ।
देउवा र प्रचण्डबीच भएकाे सहमतिपत्र
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माअाेवादी केन्द्रबीच ७ बुँदेँ सहमति भएकाे थियाे । सहमतिपछि नेकपा माअाेवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी अाेली नेतृत्वकाे सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएकाे िथयाे । समर्थन फिर्तापछि प्रधानमन्त्री केपी अाेली अल्पमतमा परेका छन् ।
नेकपा माअाेवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । माअाेवादीकाे नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति पनि भइसकेकाे छ ।